Baro Xeeladaha Yaraynta Qashinka Cunnada iyo Dib-u-warshadaynta Dugsiyada K-12 - Xarunta EcoTechnology
Yaraynta qashinka cuntada ee DUGSIYADA K-12
Xarunta Tignoolajiyada EcoTechnology (CET) waxay ka caawisaa hagida machadyada waxbarashada sida loo wanaajiyo habka ay u xalliyaan cunnada khasaartay oo ay u yareeyaan qashinka gudaha Maraykanka. Iyadoo lala kaashanayo ururo badan, dugsiyada ku yaala gobolada sida Rhode Island, Connecticut, iyo Massachusetts waxay hirgeliyeen ka hortagga qashinka cuntada, soo kabashada, iyo barnaamijyada weecinta. Si loo taageero dadaalladan, CET waxay martigelin doontaa aqoon-is-weydaarsi dugsiyada K-12 ee gobolladan Noofambar 17: "Yaraynta qashinka cuntada ee dugsiyada K-12: Xeeladaha Kahortagga, Deeqaha, iyo Dib u warshadaynta”. Ka qaybgalayaasha webinar-kan waxay baran doonaan fursadaha kala duwan ee la heli karo, waxay heli doonaan faham qoto dheer oo ku saabsan dheefshiidka anaerobic, oo waxay maqlaan sheekooyinka guusha ee dugsiyada.
CET iyo hay'adaha kale waxay kala shaqaynayaan dugsiyada Waqooyi-bari si ay u hirgeliyaan xalalka cuntada luntay, sharxaan siyaasadaha iyo sharciyada la xidhiidha ku-deeqidda cuntada, iyo isku xidhka dugsiyadan iyo bixiyeyaasha adeegga. Waxaa jira fursado badan oo lagu baran karo wax badan:
KOOXDA CAGAAR, barnaamijka waxbarashada deegaanka kaas oo awood u siinaya ardayda iyo macalimiinta si ay uga caawiyaan deegaanka iyada oo loo marayo yaraynta qashinka, dib u isticmaalida, dib u warshadaynta, compoting, ilaalinta tamarta iyo ka hortagga wasakhda, ayaa shaqo ka qabanaya Massachusetts. Barnaamijkan waxa maalgeliya Waaxda Ilaalinta Deegaanka ee Massachusetts oo ay maamusho CET.
Rhode Island, Naadiga Dib-u-warshadaynta Dugsiyada Rhode Island waxay la tacaalaysaa qashinka cuntada iyada oo loo marayo deeq ay dhawaan ka heleen taageerada Waaxda Maareynta Deegaanka ee Rhode Island iyo Gobolka EPA 1. Iyada oo qayb ka ah iskaashiga Get Smart Food, Rhode Island, waxay sameeyeen Qalabka K-12furayaa faylka PDF . Waxa ka mid ah agabka iyo talooyinka dugsiyada sida loo dhimo qashinka cuntada, oo koobaya daraasado kiis iyo hagis loogu talagalay maaraynta cuntada dheeraadka ah, iyo sidoo kale siyaabaha looga qaybgelinayo bulshada dugsiga si ay u soo saaraan xal.
Waaxda Ilaalinta Deegaanka ee New Jersey, iyada oo la tashatay Waaxda Beeraha ee New Jersey, Waaxda Waxbarashada New Jersey, Waaxda Caafimaadka ee New Jersey, iyo Xafiiska New Jersey ee Xoghayaha Tacliinta Sare, waxay soo saartay go'an Tilmaamaha Qashinka Cunnada Dugsigafurayaa faylka PDF . Dukumeentigani waxa uu qeexayaa faa'iidooyinka ay leedahay dhimista cuntada khasaartay, talooyinka ku saabsan sida dugsiyadu ugu dari karaan macluumaadkan manhajkooda, iyo sidoo kale talooyinka hirgelinta barnaamijyada dhimista iyo deeqaha.
Si aad wax badan uga ogaato agabyada noocan ah iyo waxa ka socda dugsiyada ku xeeran ka hortagga qashinka cuntada, Hubi inaad u habayso webinar-kayaga.
SIDA DUGSIYADA AY U YAREEYAAN QASHINKA
CET waxay siisaa talooyinka loo habeeyay dugsiyada K-12 la tashi bilaash ah ka dib Daraasad fiidiyoow ah oo ku xeeran dadaalka Dugsiga Wilton ee Wilton, CT, tusaale ahaan, waxay soo bandhigaysaa sida talooyinkani u eegaan ficil ahaan. Waxaad ka arki kartaa daraasadda kiiska hoos ama halkan.
Si aad wax badan uga barato barnaamijyada ganacsiyada iyo machadyadu ay fulinayaan, daawo fadhiga Dabagalka ah ee Shirarka Nidaamka Cuntada ee Jasiiradda Rhode Island 2021, sida lagu arkay Kiiska Ganacsiga ee dhimista, Samatabbixinta, iyo Dib-u-warshadaynta Cuntada Qashintay. Webinar-kan guulaystay waxa uu ku lug lahaa dood ku saabsan dhinacyada waaqiciga ah ee dhimista, badbaadinta, iyo ka dhigista cuntada dheeraadka ah.
U SOO GUDBINTA SIDA XAL CUNTADA LAGU QARINAYO
Burburinta waa qayb muhiim ah oo ka mid ah hababka maaraynta ugu wanaagsan ee biyaha dabaylaha (BMPs), sida ay sheegtay EPA. Sida lagu qeexay boggoodaTusaalooyinka BMP-yada waa: bustaha compost, shaandhada shaandhada, iyo sharabaadada shaandhada. BMPs-yadani waa kuwo wax ku ool ah sababtoo ah awoodda compost si ay u nuugaan xaddi badan oo biyo ah, si arrimaha sida nabaadguurka aysan u kicin, iyo sharafta qaab dhismeedka ciidda aan la wiiqin. Compost ayaa sidoo kale faa'iido u leh tayada biyaha maadaama ay dabinayso walxaha waxyeelada leh, iyadoo sidoo kale ilaalinaysa wasakhda biyaha duufaanka. Sida tafatiran ee ku saabsan Mareegta Golaha Composting ee Maraykanka, waxa ay sidoo kale caawisaa koritaanka dhirta iyo caafimaadka, ilaalinta biyaha, iyada oo la yareynayo isbedelka cimilada iyo hagaajinta caafimaadka qoyan, iyo waxyaabo kale.
Muhiimadda bacriminta iyo haynta biyaha roobka ayaa ka muuqata hindisaha Ciidda Caafimaadka leh ee badaha Rhode Island (HSHSRI). Mashruucu wuxuu diiradda saarayaa Aquidneck Island ee Rhode Island, wuxuuna raadinayaa inuu kordhiyo dadaallada bacriminta iyada oo loo marayo waxbarashada iyo xoojinta. Mashruucu wuxuu xooga saarayaa xidhiidhka ka dhexeeya carrada caafimaadka qabta iyo badaha caafimaadka qaba, sida magacaba ka muuqata, wuxuuna ka shaqaynayaa in la isku daro hindisayaasha bacriminta si waxtar weyn loo yeesho, oo ay ku jiraan marka ay timaado deegaanka iyo ururinta qashinka ganacsiga. Dhinacyada kale ee mashruuca waxaa ka mid ah tababarida dugsiyadu inay noqdaan qashin eber, dadaalo dheeri ah oo wacyigelineed, bacriminta deegaanka/magaalada, isticmaalka ciidda wareegta ah, xog ururinta iyo soo bandhigida, iyo u ololaynta isbedel ku jihaysan waarta. CET waa shuraako sharaf leh hindisaha HSHSRI, oo ay weheliso Helitaanka Badweynta Nadiif ah, Warshada Compost, iyo Compost Dhulka Madow. HSHSRI waxa ay suurto galisay taageero ka timid Racing Saac 11aad.
SIDEE AAN U CAAWIN KARNAA
CET waxay bixisaa gargaar qashin-qubka ah marka ay timaaddo hirgelinta barnaamijka ee dadaallada dhimista qashinka iyo bacriminta. Kaalmadu waa bilaash waxayna u ogolaataa hay'adaha inay tilmaamaan fursadaha dib-u-warshadaynta, dib-u-isticmaalka, iyo soo kabashada cuntada. CET waxa ay fududaysaa qiimaynta qulqulka qashinka ee jira, ogaanshaha fursadaha la xidhiidha leexinta qashinka, ka-hortagga, iyo soo kabashada, awoodsiinta shaqaalaha iyada oo loo marayo waxbarashada, naqshadaynta iyo hirgelinta calaamadda qashinka qashinka, falanqaynta kharashka ee ku saabsan barnaamijka leexinta qashinka, iyo dhisidda xidhiidhada qashin-qaadayaasha iyo processor-yaasha. Caawimada waxaa lagu heli karaa taleefoon, iimaylka, iyo goobta ama booqashooyinka farsamada, sida ay khuseyso. Nambarka taleefanka lagala xiriiri karo waa 413-445-4556, halka weydiimaha sidoo kale lagu soo diri karo wastedfood.cetonline.org. Booqashooyinka goobta waxa la qabanqaabin karaa ka dib marka macluumaadka hordhaca ah la ururiyo.
CET waxa ay safka hore kaga jirtay shaqada muhiimka ah ee yaraynta isbedelka cimilada iyada oo loo marayo dhimista cuntada. Ka-qaybgalka la-hawlgalayaasha badan ee shaqada muhiimka ah ee la qabanayo, sida MassDEP's GREEN TEAM iyo Naadiga Dib-u-warshadaynta Dugsiyada Rhode Island, waxay la macno tahay in iskaashi, hab dhinacyo badan leh oo wax looga qabanayo qashinka cuntada la isticmaalo, iyadoo la rajeynayo in barnaamijyo badan ay iman doonaan. la hirgeliyo mustaqbalka.